Email: Mgbalite Nro na Nkwụghachi Mgbanwe Siri Ike Nkọwa na Nkọwa | Martech Zone
Email ibiaghachi bụ mgbe azụmahịa ma ọ bụ Nweta Ọrụ Servicentanetị na-eweta adreesị ozi-e anabataghị email maka otu adreesị ozi-e na otu koodu weghachitere na a jụrụ ozi ahụ. A na-akọwa bounces ahụ ka ọ dị nro ma ọ bụ sie ike. Soft bounces na-adịkarị nwa oge ma bụrụ isi koodu iji gwa onye zitere ha na ha nwere ike chọọ ịnọgide na-anwa. Ike siri ike na-a na-adịgide adịgide na-koodu na-agwa ziri ozi ka ọ ghara ịgbalị iji zipu ozi ọzọ ka nnata.
Nkọwa nke ibiaghachi nro
A adụ nro bụ ihe ngosi nwa oge nke esemokwu na adreesị email nnata. Ọ pụtara na adreesị ozi-e ziri ezi, mana sava ahụ jụrụ ya. Ihe a na-ahụkarị maka mbido dị nro bụ igbe akwụkwọ ozi zuru oke, ihe nkesa, ma ọ bụ ozi ahụ buru oke ibu. Imirikiti ndị na-enye ọrụ email ga-anwa ịgbalị izipu ozi ọtụtụ oge na oge ole na ole tupu ịhapụ. Ha nwere ike ma ọ bụ enweghị ike igbochi adreesị ozi-e na iziga ọzọ.
Nkọwa nke Mgbapụta siri ike
A ibiaghachi siri ike bụ ihe na-adịgide adịgide nke esemokwu na adreesị email nnata. Ọ pụtara na, o yikarịrị, adreesị ozi-e anaghị adị irè na sava ahụ jụrụ ya kpamkpam. O nwere ike ịbụ adreesị ozi-e ezighi ezi ma ọ bụ adreesị ozi-e nke na-adịghị ma ọ bụ na-adịkwaghị na sava ozi nnata. Ndị na-enye ọrụ email ga-egbochikarị ịkpọtụrụ adreesị ozi-e ndị a iziga ọzọ. Izipu ugboro ugboro na adreesị ozi-e siri ike nwere ike ịnweta ndị na-eweta email gị blacklist.
4XX Nkwalite Ntanetị na Usoro Mgba Anya siri ike na Nkọwa
Usoro ụdị Description
421 Soft Ọrụ adịghị
450 Soft Leta ozi adịghị
451 Soft Njehie na nhazi
452 Soft Nchekwa usoro ezughi oke
Dị ka otu n'ime ndị na-aza ajụjụ anyị kwuru n'okpuru ebe a, n'ezie RFC jikọtara na nnyefe email na koodu nkwụghachi na-ezipụta na Koodu na usoro 5.XXX.XXX bụ Ọdịda Na-adịgide Adịgide, ya mere nhọpụta nke koodu ike nwere ike bụrụ ihe kwesịrị ekwesị. Okwu a abụghị koodu eweghachitere, ọ bụ otu ị ga-esi mesoo adreesị ozi-e sitere na ya. Ọ bụrụ na Koodu egosiri n'okpuru, anyị na-egosi ụfọdụ Koodu dịka Soft.
N'ihi gịnị? Maka na inwere ike ịtụle ma ọ bụ zigara ndị nnata ahụ email ọhụrụ n'ọdịnihu ma ha ga-arụ ọrụ nke ọma. Nwere ike ịchọrọ ịgbakwunye mgbagha na nnyefe gị iji tụgharịa ọtụtụ oge ma ọ bụ gafee ọtụtụ mkpọsa. Ọ bụrụ na koodu dịgidere, ịnwere ike imelite adreesị ozi-e dịka enweghị ike ịtọhapụ.
5XX Nkwalite Ntanetị na Usoro Mgba Anya siri ike na Nkọwa
500 ike Adreesị adịghị
510 ike Ọnọdụ adreesị ndị ọzọ
511 ike Adreesị igbe ozi na-adịghị mma na-aga
512 ike Adreesị usoro njedebe ọjọọ
513 ike Adreesị ozi ịntanetị adreesị ọjọọ na-aga
514 ike Ebe igbe akwụkwọ ozi adighi nma
515 ike Ebe adreesị igbe ozi dị mma
516 ike Igbe akwụkwọ ozi emegharịala
517 ike Akwụkwọ ozi adreesị ozi igbe mail na-ezighi ezi
518 ike Adreesị sistemụ ọjọọ
520 Soft Ọnọdụ igbe akwụkwọ ozi ọzọ ma ọ bụ akọwapụtaghị ya
521 Soft Enweghi ike na igbe akwụkwọ ozi, anaghị anabata ozi
522 Soft Igbe akwụkwọ ozi juputara
523 ike Ogologo ozi gafere oke nhazi
524 ike Nsogbu ndepụta mgbasa ozi
530 ike Ndị ọzọ ma ọ bụ undefined mail usoro ọnọdụ
531 Soft Usoro ozi juputara
532 ike Sistemụ anaghị anabata ozi netwọkụ
533 ike Sistemụ enweghị ike ịhọrọ atụmatụ
534 ike Ozi buru oke ibu maka sistemụ
540 ike Netwọk ọzọ ma ọ bụ akọwaghị akọwapụtara ma ọ bụ ọnọdụ ntụgharị
541 ike Ọ dịghị azịza sitere na onye nnabata
542 ike Njikọ adịghị mma
543 ike Ndagharị usoro nkesa
544 ike Enweghi ike ịga
545 Soft Mkpokọta netwọk
546 ike Achọpụtara ụzọ ntụgharị
547 ike Oge nnyefe gwụrụ
550 ike Ọnọdụ protocol ọzọ ma ọ bụ akọwapụtaghị ya
551 ike Iwu na ezighi ezi
552 ike Nhazi syntax
553 Soft Ọtụtụ ndị nnata
554 ike Arụmụka iwu na ezighi ezi
555 ike Nsonaazụ protocol na-ezighi ezi
560 ike Njehie mgbasa ozi ndị ọzọ ma ọ bụ nke a na-akọwaghị
561 ike Media anaghị akwado
562 ike Ntughari choro ma machibido
563 ike Ntughari achọrọ mana anaghị akwado ya
564 ike Ntughari na ọnwụ e mere
565 ike Ntughari dara
570 ike Ọnọdụ nche ọzọ ma ọ bụ akọwapụtabeghị ya
571 ike Nyeghị ikike, ozi jụrụ
572 ike Amachibidoro mgbasa ndepụta,
573 ike Nche nche achọrọ ma ọ gaghị ekwe omume
574 ike Security atụmatụ anaghị akwado
575 ike Odida Cryptographic
576 ike Cryptographic algọridim anaghị akwado
577 ike Ozi iguzosi ike n'ezi ihe
911 ike Ike ibiaghachi na-enweghị ibiaghachi koodu hụrụ Ọ pụrụ ịbụ ghara ịdị irè email ma ọ bụ jụrụ email gị ozi ihe nkesa na- (dị ka site na a na-ezipụ ịgba)
ISfọdụ ndị ISP nwekwara nkọwa ndị ọzọ na koodu ibiaghachi ha. Lee AOL, Comcast, Cox, Outlook.com, Postini na Yahoo!Saịtị saịtị postmaster maka nkọwapụta ibiaghachi koodu ọzọ.
Tags: 400 bounce Koodu421 nro nro450 nro nro451 nro nro452 nro nro500 bounce Koodu500 bounce siri ike510 bounce koodu511 bounce kooduibiaghachi koodu nkọwaibiaghachi koodu nyochabounce Kooduemail ibiaghachi Kooduibiaghachi siri ikeusoro ibiaghachi siri ikesiri ike ma ọ bụ nro nroOchie 3463adụ nrokoodu nloghachi nro
Dee 5, 2016 na 3: 56 AM
Ndewo, enwere m mgbagwoju anya na etu esi eme ka ọnọdụ email ahụ dabere na koodu ahụ ma ọ bụ nke dị nro ma ọ bụ nke siri ike. N'ihi na ebe a, na RFC 3463 (https://tools.ietf.org/html/rfc3463) ọ na-ekwu na koodu ndị dị n'ụdị 4.XXX.XXX bụ Persistent Transient Failures nke pụtara na ha dabara n'ụdị ibiaghachi dị nro na Koodu na usoro 5.XXX.XXX bụ Permanent Failures, nke pụtara na ha daa n'okpuru nnukwu nsogbu.
Nwere ike ịkọwapụta ihe kpatara ụfọdụ koodu ọkwa nke na-amalite site na 5 bụ nkewa dị ka bounces dị nro n'isiokwu a?
Echere m na ikike gị Rajit, onye edemede kwesịrị ịkọwapụta ma mezie isiokwu ahụ. Ọ dịghị ihe dị njọ karịa ịgha ụgha!
Jenụwarị 14, 2017 na 6:53 PM
Ndụmọdụ siri ike Rajith na David. Aga m agbanwe edemede ahụ ma tinye ụfọdụ ndetu.
Aug 1, 2017 na 12:30 PM
Ndewo m nwere ajụjụ, ana m eme ọgbakọ ọgbakọ anyị na ozi ọ na - ekwu maka syntax, DNS, Quota na enweghị isi. Invaild i quess is simple the mailadres na ezighi ezi edere ya na oke probaly pụtara na igbe ozi juru. Nke a ọ bụ eziokwu? Ọ bụrụ na ọ bụghị gịnị ka ọ pụtara? dị ka wel ka wat ka ọzọ abụọ pụtara: syntax na DNS? kelee Gouwe